[Ukara] Wondershare Photo Recovery for Mac - Mac Photo Recovery
Professional Software maka foto na vidiyo Iweghachite
Mgbe 600 photos wee mysteriously efu (na ha bụ maka ọkachamara ọrụ nzube) m fọrọ nke nta furu efu uche m! Awa ma yiri awa egbughị mgbe m GoPro SD kaadị mberede kọrọ na "ọ dịghị faịlụ" na m nwere ike obi sie gị ekweghị m na mberede ihichapụ, reformat ma ọ bụ dobe igwefoto. Ihe e otu awa tupu na mberede adazuwo. M na-achọgharị dị iche iche Google results ma gbalịa 2 ọzọ mgbake omume downloads (efu results na ha) m mesịrị gbalịrị _1_227_1 _..... na skeptically na na. Maa amụma???! Bụ ike naghachi ihe oyiyi nile echiche efu si ụnyaahụ photos gbaa nakwa dị ka 1000 ọzọ m wee afọ gara aga. Nke a bụ ihe kasị mma $45.00 na m nwere ike nọrọ na m ike ikwu na ngwaahịa a ma ọ bụrụ na gị onwe gị kwa na-Anam Udeme ntutu gị pụta, na-aṅụ iyi a eriri nke okwu rere ure na gị na e weere furu efu oyiyi na gị GoPro. 5 kpakpando!
Nwa m nwaanyị agbaziri igwefoto m Foto mkpara na nnukwu ulo oru mbo ike ebe ọ na-arụ ọrụ n'ihi na ha na saịtị weebụ. Ha niile ọkọdọ uwe elu n'ihi na ọ na photos ndị ikpọ. My ọhụrụ Mac sistemụ ugbu a ga-emepe SD kaadị dị ka draịva kama na Nikon Nyefee software otú ahụ ka m na-ezighị dezie faịlụ na kaadị ahụ na-etinye ma kaadị azụ na igwefoto na reformatted ha. Apụghị m ichetụ n'echiche otú m ga-agwa nwa m. Hụrụ nke a software online. Mgbe m hụrụ raw faịlụ egosi na preview m bee ákwá. Chọpụta, na interface pụrụ ịdị mma ma na ị nwere inye n'aka ihe na-arụ ọrụ.
Dị nnọọ mma software. M nwetara foto m azụ formatted igwefoto kaadị.
Anyị na-ama mmadụ na mberede ehichapụ ụfọdụ ochie nke ezinụlọ foto site na kọmputa anyị na di m hụrụ nke a software. Chọpụta ezu-anyị azụ elu na-agba ọsọ na anyị photos n'oge na-adịghị!
The faịlụ mmadụ na mberede ehichapụ si anyị nke obodo ezumike na mama m chọrọ nwere ebipụta outs. M maara na ọ nwetara edikpu mgbe m gwara ya na e nwere ike ghara ịbụ a ụzọ agbake photos. M achọwo ngwọta na hụrụ Photo Recovery! Ebudatara ikpe na mere Doppler. Ọ kpam kpam na-arụ ọrụ! M mkpa ka ịzụta a software nke mere na mama m ga-enwe obi ụtọ na foto ndị azụ. Daalụ nke ukwuu!
M ka na-adịghị nnọọ ọhụrụ m Mac na ọ \_ 's nnọọ ike ịmụta ugbu a mgbe ị na \_' re okenye. M \_ 'M ekele n'ezie na ndị a iche iche software haziri maka kwupụta enyere ndị mmadụ aka onye na-apụghị n'ezie troubleshoot ndị a ụdị nsogbu ndị dị ka nlaghachie nke faịlụ mgbe nhichapụ. M bụ ike iji weghachite ihe niile! Daalụ maka enyemaka dị ukwuu!
M ebudatara ikpe mbipute mbụ na-ego ma ọ bụrụ na ọ ga-ike iṅomi na-ehichapụ photos. M \_ 'M anya n'ezie, ọ! Ọ kpam kpam zọpụta m foto site na a na-efu ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụrụ na e \_ 'SA software m ga-ukwuu nwere ike ikwu, nke a ga-abụ onye na n'elu! Daalụ!
M didn \_ 't-atụ anya na nke a dị mfe ma dị mfe iji software maka Mac nwere ike ịbụ ndị dị otú ahụ a ngwá ọrụ dị ike maka na-agbake faịlụ na m \_' Anụla mmadụ na mberede ehichapụ! M nnọọ anya ịhụ ọbụna ndị photos m \_ 'M maara m ama efu mgbe m mere a miri emi mgbake. Nke a bụ ndị dị otú ahụ a oké software m \_ kpụrụtụ maa nwere ike ikwu!
Ibudatara na zụrụ a Software. Ọ na-arụ ọrụ oké !!. Chere na ama m furu efu karịrị 100 eserese si Summer Ezumike. Didn \_ 't chọrọ na-eji $ 45 Ma m na-eche ọnụ ahịa ya. Ekele Tim
Furu efu gị Digital Photos? Daa jụụ!
Wondershare Photo Recovery for Mac: Nnapụta photos ọ bụla na nchekwa ngwaọrụ ma ọ bụ igwefoto dijitalụ.
Nke a Mac foto mgbake software ngwá ọrụ na-ahapụ gị naghachi gị niile furu efu, ehichapụ, Ị na keerughi photos, videos na music faịlụ site na gị Mac ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa na ngwaọrụ. Ọ na-enye zuru ezu foto mgbake ọ bụla na Mac-dabeere ike mbanye, iPod, USB mbanye, mpụga ike mbanye, na igwefoto dijitalụ na ndị ọzọ na nchekwa media. Na ihe dị mfe na-eji interface, ọbụna novice ọrụ nwere ike naghachi foto na Mac na oké ala nnọọ ole na ole òké clicks.
• Echefuola File Iweghachite - Naghachi photos, videos na music faịlụ ehichapụ site Wụk + Hichapụ, ma ọ bụ sitụbeghị ahịhịa, na efu faịlụ site na formatted ma ọ bụ merụọ partitions.
• Raw Iweghachite - Deep Doppler na-agbake furu efu photos, videos na music faịlụ si ma Mac draịvụ ike na ndị ọzọ na obere nchekwa ngwaọrụ na HFS + / abụba / NTFS / NTFS5 faịlụ usoro.
Naghachi All Photos, Video na Music
Naghachi bụghị nanị ihe oyiyi, kamakwa video na ọdịyo faịlụ.
Naghachi foto site na Mac na nchekwa media dị ka USB mbanye, flash kaadị, igwefoto dijitalụ, ike mbanye, iPod, wdg Kasị foto mgbake software Mac ugbu a na ahịa nwere ike iweghachi foto site na media nchekwa naanị.
2 pụrụ iche e mere Mac foto mgbake modes- ehichapụ mgbake na Deep Iweghachite emewo ka mgbake ahụmahụ na Mac.
Kasị data ọnwụ ndapụta na-kpuchie Naghachi photos furu efu n'ihi kpachaara anya ma ọ bụ na mberede nhichapụ, na-ezighị ezi ngwaọrụ ojiji, formatting, virus ọrịa, software okuku, na ihe ndị ọzọ.
Preview, ị na-ekpebi Naghachi ma ọ bụ bụghị
Preview nke ihe oyiyi na igwefoto Raw faịlụ n'ihu mgbake-ahapụ gị inwale mgbake àgwà n'ọdịnihu.
Nye ezigbo oge na kpọmkwem Doppler results site n'igosipụta recoverable photos n'oge Doppler usoro ka ị kwụsị Doppler ozugbo lekwasịrị photos na-achọta.
Naghachi All Original aha, Info
Naghachi ehichapụ foto site na Mac na mbụ faịlụ aha, agbapụ ụbọchị, na nchekwa ụzọ.
Kpomkwem chọọ gị mgbake results maka kpọmkwem faịlụ aha gị mkpa.
Naghachi foto na Mac nanị n'ime 3 mfe nzọụkwụ, dị nnọọ ka mfe dị ka 1-2-3. Ọ dịghị mgbake nkà mkpa.
High Quality & Nche
High ikwesị ntụkwasị obi, ọ dịghị mkpakọ na gị photos, na ọ dịghị n'ihu mmebi data gị.
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos na Mac
Video Iweghachite Mac: Olee naghachi ehichapụ Video on Mac